JJ Benítez: ọ bụ onye edemede na-esote Caballo de Troya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | akụkọ sayensị emeghị eme, Ndị edemede, Akwụkwọ
JJ Benítez bụ otu n’ime ndị nta akụkọ na ndị na-ede akwụkwọ na Spanish na-asụgharịkarị akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ọ bịara mara ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa dum site na saga pụrụ iche, Anyịnya Troy, mekwara ka ọrụ odeakụkọ a na-aga nke ọma. Ihe akaebe nke a bụ mmata nke nnukwu ọrụ ya na 2021 Navarra Journalists Award.
N'aka nke ọzọ, Benítez ararawo ọtụtụ ndụ ya iji dozie ihe omimi (tumadi metụtara ufology). N'ezie, na ngwụcha 70s o kpebiri ịhapụ akwụkwọ akụkọ ọkachamara iji mebie agụụ ya maka UFO. Ruo ugbu a, onye edemede Navarrese rere ihe karịrị nde 15 n’etiti edemede, akwụkwọ edemede, akụkọ nchọcha na abụ.
1 The Trojan ịnyịnya saga
1.1.1 Akwụkwọ ndị ọzọ na Trojan Horse usoro
2 M, Jules Verne (1988)
3 UFO m kacha amasị m (2001)
4 Ọdachi Yellow (2020)
5 Biography nke JJ Benítez
5.1 Oge ndi nta akuko
5.2 Onye edemede
5.3 Njirimara akwụkwọ JJ Benítez
5.4 Ndepụta akwụkwọ akụkọ site n'aka JJ Benítez
7 JJ Benítez taa
Saga Anyịnya Troy
Usoro a na-eme njem site n'oge onye ebum n’uche ya bụ ịmara “ndụ ahụ nke bụ ndụ n’ezie” nke nwoke a kacha mara amara n’akụkọ ihe mere eme nke mmadụ: Jizọs onye Nazaret. Site na esemokwu dị otú ahụ, esemokwu ahụ karịrị nkwa. N'ihi ya, Benítez meriri ọtụtụ ndị nkatọ, ọkachasị n'ime Chọọchị Katọlik na olu ndị na-adịghị agbanwe agbanwe nke Ndị Kraịst.
Otú ọ dị, a pụghị ịgbagha agbagha na Anyịnya Troy A na-enwe ekele maka ya dị ka akwụkwọ akụkọ oge ochie na Spain. N'ezie, site na mbipụta nke mpịakọta mbụ na 1984, nkata ya abanyela na echiche ndị Spain. Ka ọ dị ugbu a, saga a nwere ụsụụ ndị na-eso ụzọ gburugburu ụwa; Ihe akaebe nke a bụ ọtụtụ otu na ọgbakọ na netwọkụ mmekọrịta.
Bido njem ahụ gara aga; a na-ewere onye na-agụ ya na AD 30, kpọmkwem n’etiti Machị 30 na Eprel 9. A na-akọ akụkọ ndị a n'isi iri na otu, otu ụbọchị. Akwụkwọ ahụ na-ewelite ihe karịrị otu narị ajụjụ na ntughari uche (ụfọdụ n'ime ha nwetụrụ ogwu) banyere agwa onye àjà ya butere Iso Christianityzọ Kraịst.
Jeruselem. Horsnyịnya ...
Akwụkwọ ndị ọzọ na Trojan Horse usoro
Caesarean ngalaba (1996)
M, Jules Verne (1988)
Banyere mmetụta akwụkwọ ya, odee Pamplona ekwuputala ugboro ugboro mmasị ya maka ọrụ Jules Verne. Ọzọkwa, Benítez mere nyocha zuru ezu banyere onye edemede na onye na-ede egwuregwu French, nke mere n'oge ahụ ji ruo ya iru eru nke "onye ọhụụ".
N'okwu Benítez, M, Jules Verne bụ akwụkwọ na Aims na-egosi na "zoro ezo ihu" nke nwoke nke otutu mmadu chere "Onye amụma nke sayensị." O doro anya na ọ bụ ederede pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere nke ọ bụla lekwasịrị anya na ndụ, mmụọ nsọ na ọrụ nke onye edemede French.
Mụ. Julio Verne
UFO m kacha amasị m (2001)
Agba nke abụọ nke nchịkọta Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ederede nzuzo, eỌ bụ ederede dị oke mkpa maka ufologists, dị ka ndị ọkachamara na mpaghara a nke nyocha si dị. Ya nnukwu ọdịnaya -odi ka edere ya maka ndi n’eto eto- na-ekpuchi ihe karịrị iri afọ atọ nke nyocha nke Benítez rụrụ.
N'aka nke ọzọ, akwụkwọ ahụ na-enye onye na-agụ ya ihe karịrị ihe oyiyi 450, nke 110 dị na ya na onye edemede ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-egosi ihe osise a na-agbasabeghị (dị ka ihe osise nke ụfọdụ ndị na-agụ kpakpando site na 29.000 afọ gara aga, dịka ọmụmaatụ). Ozo, Benítez boro NASA ebubo ịbụ ụlọ ọrụ ụgha ma na-eweta ilu na-adọrọ mmasị; otu n'ime ha bụ "gịnị mere na ị laghachighị n'ọnwa?"
UFO m kacha mma (The ...
Ọdachi edo edo (2020)
Ọdachi edo edo bụ akwụkwọ kacha ọhụrụ e bipụtara na Benítez, onye kwadebere ya n'ụgbọ mmiri njem mgbe ọrịa Covid-19 malitere na Europe. Banyere akwụkwọ a, onye ode akwụkwọ kwuru, sị: “ọ bụ ihe osise na-adọrọ mmasị nke ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mba ụfọdụ kwenyere na ha karịrị ndị ọzọ, ha ji ezigbo nlelị na-ele gị anya, mana ha tụrụ egwu dịka anyị "...
N'aka nke ọzọ, okwu a bu “odo” n’aha aha ya bu mmalite (yikarịrị ka WHO) nje nke China nke ahụ agbanweela echiche nke "ịdịkarị" na narị afọ nke iri abụọ. Ya mere, akwukwo a bu ihe ngosi di uku banyere otu egwu nke onwu si adighi akpa oke onodu ndi mmadu ma obu ebe o sitere.
Nnukwu ọdachi ...
Biography nke JJ Benítez
Na Septemba 7, 1946, a mụrụ Juan José Benítez na Pamplona, ​​Spain. Site n'oge uto ya ọ rụrụ ọrụ aka metụtara eserese na seramiiki. Dika ya onwe ya kwuworo, obu mgbe obu nwata nwoke nwere mmasi nke nwere mmasi ichota ihe n’eme gburugburu ya. Ọ bụghị n'efu, O kpebiri ịmụ sayensị sayensị na Mahadum Navarra (ọ gụsịrị akwụkwọ na 1965).
N'ọnọdụ ọ bụla, ndị ọgụgụ isi Spen anaghị agọnahụ esemokwu ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị arụmụka ọha na eze tụlere ya. Benítez elebaraghị anya nke ukwuu banyere olu ndị na-agbagha na o nwechaghị ike nke sayensị ma bo ya ebubo na ọ na-echekarị echiche. Otu ọ dịla, ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ gburugburu ụwa amaraworị ụzọ nyocha ya.
Oge ndi nta akuko
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Navarra, Benítez malitere ịrụ ọrụ na 1966 maka akwụkwọ akụkọ ahụ Eziokwu, na Murcia. Mgbe ahụ ọ gafere Akwụkwọ akụkọ si Aragon na Akwụkwọ akụkọ North nke Bilbao. N'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ ekwuru, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya pụrụ iche n'ọtụtụ ebe na Europe wee gaa ụwa niile.
N’afọ ndị 1970, onye nta akụkọ Navarrese lekwasịrị anya n'ọrụ nta akụkọ ya na ufology (A na-ewere ya dị ka ikike ụwa n'okwu a). N'otu aka ahụ, ọ gwụchara nyocha na Turin Shroud wee chịkọta akwụkwọ sitere na Spanish Air Force na ihe omume UFO.
Na 1979 Benítez gbahapụrụ akwụkwọ akụkọ nkịtị iji rara onwe ya kpamkpam na nyocha nke ọdịmma onwe ya. N'ịbụ usoro nke ebumnuche na-enye ihe ọmụma, onye nwere ọgụgụ isi si Pamplona malitere ibipụta nkwubi okwu nke ajụjụ ya. N'ihi ya, Ọ bụghị ikwubiga okwu ókè ikwu na nchọpụta ahụ mere ka ọ bụrụ onye edemede, tinyere akwụkwọ karịrị akwụkwọ iri isii rue taa.
Benítez ekwuola ọtụtụ oge na ide ederede chọrọ ịmara otu esi akọ akụkọ. N'okwu a, o doro anya na ọ mụtara igosipụta agụụ ya maka ihe omume ndị na-abụghị obere ma ọ bụ ike nghọta. N'ihi ya, akwụkwọ mbụ ya pụtara: UFOs: SOS nye mmadu (1975), sotere akwukwo nwere ezi ahia di nma dika edemede Ndị na-agụ kpakpando Jehova (1980) na Ndị ọbịa ahụ (1982).
Njirimara akwụkwọ JJ Benítez
Na JJ Benítez, ọrụ nke onye nyocha na onye edemede jikọtara n'otu. Nchikota a emeela ọrụ nke gụnyere uri, edemede, nkà ihe ọmụma na akwụkwọ akụkọ. Mana, obughi nani banyere otutu ihe mana banyere olu nkọwa, omimi nyocha na nhazi uzo di iche iche choro nke akwukwo edere.
Yabụ, onye ode akwụkwọ Spanish yiri ka ọ ga-enwe ike ikpuchi ya niile, ebe ọ bụ na otuto o nwere akwụkwọ nyocha na akwụkwọ, Mmadu ozo di adi (1977). Ọzọkwa, nwere usoro onyonyo, Chantwa mara mma, ahaziri na mpaghara iri na atọ na-agbasa n'etiti 2003 na 2004. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Benítez enweghị njedebe mgbe ọ na-akọ akụkọ na ikwupụta nchegbu.
Ndepụta akwụkwọ akụkọ site n'aka JJ Benítez
Nnupụisi Lucifer (1985)
Onye Uhie Pope (Ebube nke Osisi Olive(1992)
Ofbọchị àmụmà (2013)
Nnukwu ọdachi edo edo (2020).
N'iburu ụdị ọrụ nyocha nke JJ Benítez rụrụ, ọ ga-abụrịrị ihe a na-apụghị izere ezere na enweghị ohere maka nkatọ na esemokwu mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara narị afọ nke ọrụ. Otu n'ime ebubo ndị kachasị mkpa bụ nke ihe onye ode akwukwo choro iji tinye uche ya karie ihe omimi nke sayensi, emi enye ọdiọn̄ọde ke owo ikemeke ndikpu.
N'echiche a, onye edemede Navarrese ekwuola nke ahụ na-enye mmetụta uche na mmetụ dị ka akụkụ bụ isi nke mmadụ. E boro ya ebubo na ọ na-edegharị akwụkwọ ndị ahụ Akwụkwọ Urantia. N'ezie, ebubo ahụ enweghị ihe ndabere iwu, ya mere, Benítez kwuru azịza (nke o meriri). Okwesiri iburu n'uche na ederede ederede a di na ndi mmadu kemgbe 1983.
JJ Benítez taa
Juan José Benítez emeela ka o doo anya na ajụjụ ọnụ dị iche iche na nso nso a na-aga n'ihu nyocha ma dee ọrụ nke ụdị dị iche iche. Nke ukwuu, na mmemme telivishọn nke Asaa (2020) kwuru "Enwere m ọrụ 140, amaara m na agaghị m emezu ha." Otu ihe doro anya, ọ ga-aga n'ihu na-eziga mgbe ọ masịrị ya, ebe otu n'ime ahịrịokwu ya kachasị mma bụ:
"Anaghị m ede ihe iji mee onye ọ bụla obi."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ nke JJ Benítez